FAQs - GanoHerb International Inc.
Reishi Nhema Kofi
Reishi T-Bhegi Nhema Kofi
Reishi Latte Kofi
Reishi Hot Chokoreti
Reishi Nhema Tea
Reishi Spore Upfu
Reishi Spore & Bvisa Capsule
Reishi 3 mu1 Capsule
Reishi Yakawedzera Capsule
Reishi Spore Oiri Softgel
Reishi Inorwadza Melon Capsule
Reishi Kurara Rubatsiro Capsule
Gumi Mushroom Capsule
Reishi Vision Kutsigira Capsule
Kupinda / Kubuda
1.Ndezvipi zvitupa zvakasikwa izvo GANOHERB yakapasa?
GANOHERB yapasa organic zvitupa zveChina, iyo US, EU neJapan, nekudaro ichivimbisa kuchengetedzeka uye kuumbwa kweGanoderma zvigadzirwa.
2. Ganoderma lucidum yakakodzera kuti munhu wese adye here?
Ganoderma lucidum ane hunyoro-hunhu. Iyo inokodzera vanhu vemhando dzakasiyana dzemuviri kutora uye haina mhedzisiro. Nekudaro, haina kukurudzirwa kune vana, vakadzi vane nhumbu uye vanaamai vanoyamwisa.
3. Inguva yakareba sei vanhu vanoda kudya Ganoderma lucidum vasati vaona mhedzisiro yeGanoderma lucidum?
Hutano-hunosimudzira mhedzisiro yeGanoderma lucidum pamuviri wemunhu iri mukugara kwayo kwenguva refu kwemaitiro akasiyana emuviri wemunhu. Muviri wemunhu wega wega uye sero metabolism metabolism kutenderera kwakasiyana, saka maitiro uye maitiro zvakare akasiyana. Kazhinji kutaura, ungangonzwa kusaneta uye nekuvandudza hunhu hwekurara mukati mehafu yemwedzi nekukurumidza. Zvigadzirwa zveGanoderma zvigadzirwa zvemakwenzi, izvo zvakasiyana nemishonga yekumadokero. Ganoderma lucidum inogona kugadzirisa mamiriro ako muviri kuti unyatsogadzirisa matambudziko ako ehutano. Naizvozvo, sekureba sekunge iwe uchizvitora mune inoshanda dhivhesi uchienderera kwenguva yakareba, iwe unogona kuona mhedzisiro yakanaka munguva pfupi kana inotevera.
4. Zvigadzirwa zveGanoderma zvinofanirwa kudyiwa usati wadya kana wapedza kudya?
Kazhinji zvinokurudzirwa kudya zvigadzirwa zveGanoderma kweawa imwe chete usati wadya nekuti muviri wemunhu une mwero wepamusoro wekutora kana zvigadzirwa zveGanoderma zvadyiwa musina chinhu mudumbu. Zvigadzirwa zveGanoderma zvinonyanya kutorwa nemvura inodziya. Kutora Ganoderma lucidum netii, muto wemazambiringa uye mamwe majusi zvinogona kukanganisa maitiro kana kuburitsa kusagadzikana.
5. Sei Ganoderma lucidum spore poda ichityorwa?
Nei iyo sporoderm yeGanoderma lucidum spores ichivhuniwa? Sezvo pamusoro peGanoderma lucidum spores ine yakaomeswa-yakapetwa yakaoma sporoderm, izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zviri muzvipenga zvese zvakaputirwa mune iyo sporoderm. Kana iyo sporoderm isina kutyorwa, izvo zvinoshanda hazvigone kupinzwa nemuviri wemunhu. Mushure mekunge sporoderm yaputswa, izvo zvinoshanda zvinokwanisa kunyudzwa nemuviri wemunhu.
6.Ndiani macapsule anoshandiswa neGANOHERB?
Izvo zvigadzirwa zveVcaps zvinomera zvemashiripiti anoshandiswa mune yakazara yakazara renji yezvigadzirwa zvinotorwa kubva kune zvakasikwa zvirimwa. Vcaps capsules akanyungudika chose mumvura uye haana kukuvadza kumuviri wemunhu. Mutengo wemashiripiti emidziyo ndeye 2-3 nguva yeakajairika gelatin capsules.
133 North Altadena Drive, Suite 400, Pasadena, CA, 91107, USA
Beijing huni gedhi expositon
Hot Zvigadzirwa - Sitemap - AMP Mobile Oolong Tea Nhema Tii, Organic Girini Tea, Oolong Tea Kuonda, Cold Green Tea, Kudzivirirwa Booster, Green Tea Cholesterol,